လူတွေစားနေကြတဲ့ ဆေးဘဲဥထဲကကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အဆိပ်အကြောင်းလူတိုင်းသိအောင် မျှဝေပေးကြပါ – Lat Khat Than
လူတွေစားနေကြတဲ့ ဆေးဘဲဥထဲကကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အဆိပ်အကြောင်းလူတိုင်းသိအောင် မျှဝေပေးကြပါ
By လက်ခတ်သံPosted on December 17, 2019 December 28, 2019
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရိုးရာဟင်းအမယ် မဟုတ်ပေမယ့် ဆိုင်တွေမှာဟင်း အမယ် တစ်ခုအဖြစ် ပါဝင်နေတဲ့ ဖီတန်သုပ် ( ခေါ်) ဆေးဘဲဥသုပ်ကို လူတိုင်းစားဖူးကြမှာပါ။ အထူးသဖြင့် ဘီယာသောက်တတ်တဲ့ လူငယ်တွေအကြားမှာ ဖီတန်ဟာ အမြည်း တစ်ခုအဖြစ် အမြဲဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တဲ့ ဟင်းအမယ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဖီတန်လို့ခေါ်တဲ့ ဆေးဘဲဥ ရဲ့ အစက တရုတ်နိုင်ငံက ဖြစ်ပြီးတော့ သူတို့ဟာ ရွံ့မြေ ၊ ဆား၊ ထုံး၊ ထမင်း ပျော့ စတာတွေကိုလိုအပ်သလိုထည့်ပြီး ဆေးဘဲဥ ရဖို့အတွက် လပေါင်းများစွာ ကြာအောင် လုပ်ကြရပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ စိမ်းပုတ်ရောင်မှသည် မီးခိုးရောင် ၊မီးခိုးရောင်မှသည်
အညိုနက်ရောင်သို့ပြောင်းလဲသွားပြီး ပြစ်ခဲမှု မှာလည်း အရည်အဖြစ်မှ ဂျယ်လီအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ အနံ့ မှာလည်း ကန့် sulphur နှင့် အမိုးနီးယား (ကျင်ငယ်ရေနံ့ ) ဘက်သို့ ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ PH level သည်လည်း ၉ -၁၀ ကြားပြောင်းလဲပြီး ပြင်းအားများသော အယ်လ်ကာလိုင်း ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါက ရိုးရာနည်းပါ။ ဒါပေမယ့် ဈေးကွက်မှာ ဝယ်လိုအား များလာတဲ့
အခါ စီးပွားရေး သမားတွေဟာ ရိုးရာနည်းအတိုင်း လုပ်ဖို့ အလျင်မမီတာကြောင့် ပိုမိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ေ ဆးဘဲဥဖြစ်တဲ့နည်းကို ဓာတု ဗေဒ ဆေးတွေ သုံးပြီး လုပ်လာကြပါတယ်။ အဲ့တာကတော့ alcium hydroxide နှင့် sodium carbonate ပျော်ရည်တွင် ဘဲဥကိုစိမ်ခြင်းက ဆယ်ရက်အတွင်း
ပုံမှန်ရိုးရာနည်း ဖြင့်ပြုလုပ်သော လအနည်းငယ်ကြာ ဆေးဘဲဥကို ပုံမှန်အရသာမပျက် ရရှိစေ တာမို့အချိန်ကုန်ခံထုတ်လုပ် လာတာပါပဲ။ ဆိုးကျိုးအနေနဲ့တော့ ခဲဓာတ် များစွာ ပါဝင်လာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ခဲဓာတ်များပြားတဲ့ အစားအစာကို စားမိရင် လူတွေဟာ ခဲဆိပ်သင့်မှုတွေဖြစ်ပြီး အသက်တိုပါတယ်။
ခဲဆိပ်သင့်ခြင်း ရဲ့ ကြောက်စရာ ဆိုးကျိုးတွေကတော့….
ဦးနှောက်မြေး ရောင်ရမ်းခြင်း ၊ခန္တာကိုယ်က ကြွက်သားများနာကျင်ခြင်း ၊ မောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း ၊ အော့အန်ခြင်း ၊ ဗိုက်နာ ဗိုက်အောင့်ခြင်း ၊ ဝမ်းချူပ် ဝမ်းလျောခြင်း ၊ သွားပိုးစားခြင်း ၊ သုတ်ကောင်များနည်းသွားခြင်း ၊
အာရုံစူးစိုက်မှုအား နည်းခြင်း အပြင် သွေးပေါင်တက်ပြီး အသက်သေဆုံးတဲ့ အထိ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့် ဆေးဘဲဥ ကြိုက်သူများ ၊ ဖီတန်သုပ်ကြိုက်သူများတို့ရေ.. ကျန်းမာရေးအသိ ကျန်းမာရေး သတိလေးနဲ့ စားသုံးနိုင်အောင် သတိပေးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်..။
မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ရိုးရာဟငျးအမယျ မဟုတျပမေယျ့ ဆိုငျတှမှောဟငျး အမယျ တဈခုအဖွဈ ပါဝငျနတေဲ့ ဖီတနျသုပျ ( ချေါ) ဆေးဘဲဥသုပျကို လူတိုငျးစားဖူးကွမှာပါ။ အထူးသဖွငျ့ ဘီယာသောကျတတျတဲ့ လူငယျတှအေကွားမှာ ဖီတနျဟာ အမွညျး တဈခုအဖွဈ အမွဲဖွညျ့ဆညျးပေးခဲ့တဲ့ ဟငျးအမယျ
လညျး ဖွဈပါတယျ။ ဖီတနျလို့ချေါတဲ့ ဆေးဘဲဥ ရဲ့ အစက တရုတျနိုငျငံက ဖွဈပွီးတော့ သူတို့ဟာ ရှံ့မွေ ၊ ဆား၊ ထုံး၊ ထမငျး ပြော့ စတာတှကေိုလိုအပျသလိုထညျ့ပွီး ဆေးဘဲဥ ရဖို့အတှကျ လပေါငျးမြားစှာ ကွာအောငျ လုပျကွရပါတယျ။ အဲ့ဒီနောကျမှာတော့ စိမျးပုတျရောငျမှသညျ မီးခိုးရောငျ ၊မီးခိုးရောငျမှသညျ
အညိုနကျရောငျသို့ပွောငျးလဲသှားပွီး ပွဈခဲမှု မှာလညျး အရညျအဖွဈမှ ဂယျြလီအဖွဈသို့ပွောငျးလဲသှားပါတယျ။ အနံ့ မှာလညျး ကနျ့ sulphur နှငျ့ အမိုးနီးယား (ကငျြငယျရနေံ့ ) ဘကျသို့ ပွောငျးလဲသှားပါတယျ။ PH level သညျလညျး ၉ -၁၀ ကွားပွောငျးလဲပွီး ပွငျးအားမြားသော အယျလျကာလိုငျး ဖွဈသှားပါတယျ။ဒါက ရိုးရာနညျးပါ။ ဒါပမေယျ့ ဈေးကှကျမှာ ဝယျလိုအား မြားလာတဲ့
အခါ စီးပှားရေး သမားတှဟော ရိုးရာနညျးအတိုငျး လုပျဖို့ အလငျြမမီတာကွောငျ့ ပိုမိုမွနျမွနျဆနျဆနျနဲ့ေ ဆးဘဲဥဖွဈတဲ့နညျးကို ဓာတု ဗဒေ ဆေးတှေ သုံးပွီး လုပျလာကွပါတယျ။ အဲ့တာကတော့ alcium hydroxide နှငျ့ sodium carbonate ပြျောရညျတှငျ ဘဲဥကိုစိမျခွငျးက ဆယျရကျအတှငျး
ပုံမှနျရိုးရာနညျး ဖွငျ့ပွုလုပျသော လအနညျးငယျကွာ ဆေးဘဲဥကို ပုံမှနျအရသာမပကျြ ရရှိစေ တာမို့အခြိနျကုနျခံထုတျလုပျ လာတာပါပဲ။ ဆိုးကြိုးအနနေဲ့တော့ ခဲဓာတျ မြားစှာ ပါဝငျလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီလို ခဲဓာတျမြားပွားတဲ့ အစားအစာကို စားမိရငျ လူတှဟော ခဲဆိပျသငျ့မှုတှဖွေဈပွီး အသကျတိုပါတယျ။
ခဲဆိပျသငျ့ခွငျး ရဲ့ ကွောကျစရာ ဆိုးကြိုးတှကေတော့….
ဦးနှောကျမွေး ရောငျရမျးခွငျး ၊ခန်တာကိုယျက ကွှကျသားမြားနာကငျြခွငျး ၊ မောပနျးနှမျးနယျခွငျး ၊ အော့အနျခွငျး ၊ ဗိုကျနာ ဗိုကျအောငျ့ခွငျး ၊ ဝမျးခြူပျ ဝမျးလြောခွငျး ၊ သှားပိုးစားခွငျး ၊ သုတျကောငျမြားနညျးသှားခွငျး ၊
အာရုံစူးစိုကျမှုအား နညျးခွငျး အပွငျ သှေးပေါငျတကျပွီး အသကျသဆေုံးတဲ့ အထိ ဖွဈနိုငျတယျလို့သိရပါတယျဒါကွောငျ့ ဆေးဘဲဥ ကွိုကျသူမြား ၊ ဖီတနျသုပျကွိုကျသူမြားတို့ရေ.. ကနျြးမာရေးအသိ ကနျြးမာရေး သတိလေးနဲ့ စားသုံးနိုငျအောငျ သတိပေးတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျနျော..။
Posted in Health, KnowledgeTagged ဆေးဘဲဥ
Previous post ဆေးဖက်ဆိုင်ရာ ဆေးခြောက်ကိုထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် သုံးစွဲပြသ
Next post အိန္ဒိယရေတပ်မှာ နှစ် ၂၉ နှစ်ကျော် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် ကမ္ဘာ့သက်တမ်း အရင့်ဆုံး အိန္ဒိယလေယာဉ်တင်သင်္ဘော အွန်လိုင်းမှ လေလံတင်